सांसद अग्रहरीको राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति सारा नेपालीले टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने? (भिडिय‍ो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सांसद अग्रहरीको राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति सारा नेपालीले टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने? (भिडिय‍ो)
admin June 10, 2020 June 10, 2020 भिडियो, समाचार 0
काठमाडौं। संघीय समाजवादी(हाल जनता समाजवादी पार्टी)का सांसद अमृता अग्रहरीले नेपालमा नेपाली भाषा बुझ्ने जनता ४० प्रतिशशत मात्रै रहेको मिथ्या दाबी गरेकी छन्। सूत्र टिभीको बहसमुलक कार्यक्रम सूत्र बसहमा कुरा गर्दै ६० प्रतिशत नेपालीले नेपाली भाषा नै नबुझ्ने दाबी गरिन्।
‘यो देशमा ४० प्रतिशतले मात्रै नेपाली बुझ्छन्।’ उनले भनिन्, ‘६० प्रतिशतले नेपाली बुझ्दैनन्। म मेचीदेखि महाकालीसम्म गएको छु। न कोहि नेपाली बोल्छ न कोहि बुझ्छ। हिमाल पहाडमा समेत मान्छेहरु छुट्टै भाषा बोल्छन्।’
तर उनले हिन्दी भाषा भने देशका कुनाकुनाका मान्छेले समेत बुझ्ने दाबी गरिन्। उनले अगाडि भनिन्, ‘हिन्दी चाहि एउटा यस्तो भाषा हो। जुन देशको कुनाकुनाका मान्छेले बुझ्छन्। तर नेपाली बुझ्ने मान्छे देशको सबै कुनामा छैनन्।’ तर आफूले नेपाली भाषाको पनि सम्मान गर्ने उनले बताइन्।
अब तथ्यतिर लागौं। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथयांकअनुसार नेपालभरिमा करिब ४५ प्रतिशत मानिसकाे मातृभाषा नेपाली हाे। तथ्यांकअनुसार ४४ दशमलव ६३ प्रतिशत नेपालीको मातृभाषा नेपाली छ। यो तथ्य हो। ४५ प्रतिशतको नेपाली मातृभाषा हो। उनले नेपाली भाषा बुझ्ने कुरा गरेकी छन्।
अर्को तथ्य हेरौं। त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक प्रा.डा. दानराज रेग्मीका अनुसार(फाल्गुन २०, २०७६ मंगलवार गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखअनुसार) २०६८ को जनगणनाले ५९ प्रतिशत मानिसहरू एकभाषी देखाएको छ । जसमा नेपाली मात्रै बुझ्ने समेत पर्छन्।
उनकाअनुसार ४१ प्रतिशत द्विभाषी छन्। जसमा मातृभाषासहित अन्य भाष प्रयाेग गर्नेहरु पर्छन्। ३२.७ प्रतिशतले नेपाली भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा उपयोग गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। जसको अर्थ उनीहरुको मातृभाषा नेपाली होइन। तर नेपाली प्रयाेग गर्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली मातृभाषा भएका करिब ४५ प्रतिशत र करिब ३३ प्रतिशतले दोस्रो भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा गरी ७७ प्रतिशत बढीले नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने देखाउँछ। अझैं नेपाली भाषा बुझ्नेको संख्या यो भन्दा बढी हुनसक्छ।
परदेशीको कथामा सुमन कार्कीको गीतमा गायिका हजुरी शाह कंडेलको ‘ए साँहिला’ हेर्नुहाेस् (भिडियो सहित)